Njengoba esendleleni eya amadolobha aseRussia, akekho ayikwazi yokuwuthola inhloko-dolobha yombuso omkhulu - eMoscow. Kukuphi lapho ungathola injabulo yangempela ezigodlweni ngokuvakashela, amasonto, iminyuziyamu, yezobuciko. Kodwa kukhona i sihloko ezithakazelisayo ewumngcingo ukuthi cishe Awulokothi travel ejensi - endaweni yalo muzi wasendulo. Umlando wabo kuhlobene eduze izenzakalo ethile yafeza indima ebalulekile ekuphileni kwama-inhloko-dolobha. Ingabe abahambi abaningi abazi Manege, noma Theatre Square , Red ngokubabazekayo, Ivanovo eliyingqayizivele futhi lombhishobhi, Vasilyevsky Spusk? Isibongo laziwa kabanzi namuhla, emuva 80s kwekhulu lama-20 ayikwazanga uzwakale iyiphi inkulumo noma ngokubhala.
On Vasilevsky Uzalo kungashiwo ukuthi umqondo ozwakalayo olwehlelayo, okuyinto okuthiwa kuphela ngo-1995. Indawo le ndawo ngemuva umlilo phakathi neMpi 1812. Futhi izakhiwo zokugcina ezidiliziwe kuphela ngo-1936. Lokhu kwakubangelwa ukwakhiwa Omkhulu eMoscow River ibhuloho.
Le ngxenye eziyingqayizivele edolobheni ngoba ingxenye enalokho kuthambekela, elinganiselwe ku Kolunye uhlangothi yashayisa unqenqema, ngakolunye ke kukhawulela endaweni abomvu. Vasilevsky Uzalo architecturally ihlanganiswe nalo.
Uma uhamba kusukela UMfula iMoscow
Area lendawo abadabuka Engcwele Virgin Ukuvikelwa Church, kangcono eyaziwa ngokuthi Cathedral Vasiliya Blazhennogo, phambi Big eMoscow River kwebhuloho kunzima ukubiza ngomqondo evamile. Futhi nesithakazelo emlandweni nje kuphela ukuthi Vasilyevsky Spusk, kodwa konke okuhambisana nakho. Futhi uma ukuma emuva emfuleni, izivakashi kwasekuqaleni esibheke Church of the lokulabhela Virgin oNgcwele. Esikhundleni salo kuze 1554 wema esontweni elincane, lelo iqanjwe zintathu Ongcwele. Kodwa ngemva ngokunqoba abantu Russian phezu le Khanate Kazan Ivan Grozny ngaphambilini sokuzakhela lombhishobhi endaweni egqamile ezisenkumbulweni lo mcimbi ngokuba bonke ubudala. Ukwakha 9 amasonto engalingani olunothile waphathiswa amakhosi Postnik kanye bartenders. Futhi 1561 Vasilyevsky Spusk eMoscow yagcotshwa eyingqayizivele nendlu yayo yesonto enkulu. Kuyamangalisa ukuthi leminyaka khona, ithempeli hhayi kuphela akalilahlile ngobukhulu bawo, kodwa futhi ngenxa amasonto sidle, kuye muhle nakakhulu.
Isimanga wadala babe ngumsebenzi wezandla zomuntu
Ekhulumela Vasilyevsky Spusk, ingasaphathwa Big Moskvoretsky ibhuloho. Kusukela ngasekupheleni kwekhulu le-15 kuze kube namuhla lokhu isakhiwo nje othola ukwakha kabusha. Ekuqaleni Crossing laliyisakhiwo ezintantayo kanye kuphela ngo-1829, ezintathu span lokhuni wathola kwesisekelo samatshe. Ajwayelekile kithi uhlobo kwebhuloho wanika abalobi ababili: unjiniyela and umklami Schusov Kirillov. Lokhu kwenzeka ngo-1937. Monolithic kwagcizelela isakhiwo ukhonkolo, uphahlwe egwadle pink, isifuthefuthe ngokuvumelanayo phakathi Ensemble yezakhiwo enkabeni yedolobha.
Futhi-ke, umlando kwebhuloho uye yabakhanga zezivakashi. Ekupheleni umshayeli German kwekhulu lama-20 Mathias Rust uye kungaqedwa inganekwane bangasephula imingcele eSoviet Union. Lokho Big Moskvoretsky ibhuloho isibe platform lokufikela izindiza owenza umshayeli.
On the Spusk Vasilyevsky namuhla
Uma isikhathi eside, le ndawo isetshenziswa kuphela yokupaka amabhasi izivakashi, kule minyaka engamashumi amathathu, isimo sesishintshile kakhulu. Le ndawo enhle Kunenkolelo ezemidlalo mass, imicimbi yamasiko kanye wobuciko. Ngakho, kusukela ngo-1996, i-International Peace Marathon uqale endaweni kwaba Vasilyevsky Spusk. Moscow uvule umnyango Red Square ngokusebenzisa ndawo eyingqayizivele elakhelene abaculi idwala.
A oseceleni okungukuthi mayelana fashion sikhombisa ku Vasilyevsky Spusk. Lokhu isethulo ezinkulu ezazenzeka amahholo ezindaweni ezintathu yenhloko-dolobha. Fashion Week labetibambile ngasekuqaleni kwentwasahlobo. Kodwa akukho sezulu ngeke siyeke emangalisayo iholide isitayela kanye ukunambitheka. Pavilions anemisila yonke izakhiwo ezidingekayo ukuze izivakashi futhi ababekhona yamjabulisa ngenduduzo waxhumana umbono kanye nomsebenzi.
YoNyaka Omusha WamaShayina ku Vasilyevsky Spusk nje ahlale isikhathi eside e-inkumbulo, kuyoba ekugubheni omunye usayikhumbula kakhulu ekuphileni kwami. Umbukiso uqala ngehora ngaphambi kwamabili. Baqeqeshelwa izilwane, jugglers, Clowns, wabavocavoci ukubungaza Muscovites. A ubuhle kumnandi of iziqhumane ngaphansi iwashi chiming uqeda iholide.
A kancane ngidabukile
imizwelo eyakhayo Akukhona nje kubangela Vasilevsky olusuka besikhathi sakhe. Kusekusha inkumbulo iziteleka zabavukuzi, imibuthano bamaqembu ezombusazwe ahlukahlukene. Kodwa nge-2012 isimemezelo Dmitriya Anatolevicha Medvedeva ku Vasilyevsky Spusk ukuhlela ukuhlangana sabantu kungenzeka kuphela emva kokuthola imvume Eliqondene Ngqo nePhini likaMongameli we Russian Federation.
uhambo ngalunye ngokusebenzisa Russia kumelwe nakanjani ziqale ukuvakashelwa eMoscow. Umlando ezitaladini zawo, iindawo ezimazombe kanye tikwele - liyincwadi interesting kufanele ufunde zonke izivakashi self-ukuhlonipha.
Sibhedlela "Pinery" Ryazan esifundeni: amazinga, ukubuyekezwa kanye website esemthethweni
Multiple sclerosis: ukwelashwa eMoscow. Moscow city centre of multiple sclerosis